के नेपालमा भारतको जस्तो अक्सिजनको अभाव बिकराल हो? – Health Post Nepal
के नेपालमा भारतको जस्तो अक्सिजनको अभाव बिकराल हो?
२०७८ वैशाख १२ गते ९:५१
सांसद तथा पूर्व सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपालगन्जको भेरी अस्पताललाई ५ हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर किन्न भनेर ५० लाख रुपैयाँ दिए। यसअघि पनि उनले भेन्टिलेटरका लागि ४५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए।
नेपालगन्जका स्थानीयलेसमेत भेरी अस्पतालमा अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिद र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग उठाउन सुरु गरेका छन्।
बाँकेको नेपालगन्ज फेरि एकपटक कोरोना ‘हटस्पट’ बनेको छ र, त्यहाँ स्थिति एकदमै भयावह छ।
कोरोनासँग अग्रपंक्त्तिमा लडिरहेका चिकित्सकहरूले नै ‘हारगुहार’ गर्न थालेपछि नेपालगन्जको भयावहतर्फ सबैको चासो बढेको हो।
यो चित्कार चिकित्सकहरूको मात्रै होइन, २४ घण्टामै ७ जनाको मृत्यु भएपछि बाँकेको स्थितिलाई सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिले नेपालगन्जमा एकसाताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ। गत बिहीबारदेखि नेपालगन्जमा गरिएको लकडाउन शनिबारदेखि नजिकैको अर्को शहर कोहलपुरमा पनि सुरु भएको छ।
नेपालगन्जदेखि नजिकै रहेको भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको मुख्यालय लखनउ यतिबेला कोरोनाले थिलोथिलो भएको छ।
अक्सिजन र बेड नपाएर बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको खबर सबैभन्दा पहिला नेपालगन्जमै फैलिन्छ।
लखनउ वा उत्तरप्रदेश मात्रै होइन अहिले पूरै भारत लगभग अक्सिजनको अभावमा तड्पिरहेको छ।
नेपालमा अक्सिजनको अभाव हो?
‘खासमा देशभरि अक्सिजनको त्यस्तो अभाव छैन’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्त्ता डा‌. समिर अधिकारी भन्छन्, ‘भारतको जस्तो अक्सिजनको भयावह त झन् हुँदै होइन। स्थिति बिग्रिँदै गए त्यस्तो अवस्था आउन सक्छ। तर, अक्सिजनको हकमा अहिलेलाई पुग्नेजति छ।’
जस्तो कि वीर, टिचिङ तथा पाटनजस्ता केही ठूला अस्पतालमा जडान गरिएका स-साना प्लान्टबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै लगभग ९ वटा अक्सिजन ग्यास प्लान्ट छन्।
तर, ती सबै अस्पतालका प्लान्टहरू बिग्रिएका छन्। कुनैमा पनि उत्पादन हुँदैन। अघिल्लो लकडाउनमा बन्द भएका चारवटाबाहेक लगभग अहिले नौवटा प्लान्टले अक्सिजन सिलिन्डर भरिरहेका छन्।
ललितपुर हरिसिद्धिमा ‘कान्तिपुर अक्सिजन उद्योग’ का बजार प्रबन्धक कुमार चुँडालकाअनुसार अहिलेकै स्थितिमा उद्योगहरूको उत्पादनले अक्सिजनको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्छ।
‘अहिले नै भारतको जस्तै अक्सिजन नपाएर बिरामीले ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छैन। भइरहेको उत्पादनले पुग्नसक्छ’ उनले भने, ‘तर, त्यसका लागि उद्योगमा उत्पादनको सहज वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ। हामीले उत्पादन गर्नसक्छौं।’
काठमाडौं उपत्यकाका यी नौवटा प्लान्टले दैनिकजसो ८ देखि १० हजार सिलिन्डरसम्ममा अक्सिजन भरिदिन सक्छन्। त्यत्तिकै मात्रामा बोक्न मिल्ने साना सिलिन्डर पनि।
त्यस्तै उपत्यकाबाहिर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मा कम्तीमा १४ वटा त्यस्ता प्लान्टहरू छन्। उनीहरूले पनि त्यत्तिकैमात्रामा सिलिन्डर भर्नसक्छन्।
‘तर, समस्या भनेको सिलिन्डरको हो। धेरै सिलिन्डर मार्केटमै अड्किरहेका छन्। बाहिरबाट ल्याउनका लागि पनि के हो, कस्तो हो भन्ने छ’, उनले भने, ‘सरकारले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाइदियो भने थप सिलिन्डर पनि ल्याउन सकिन्छ।’
जस्तो कि अघिल्लो लकडाउनका बेला अनि यो कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदै गर्दा पनि मानिसले सिलिन्डर किनेर घरमै राखेका थिए। ती अझैं उद्योगले फिर्ता पाएका छैनन्।
‘त्यो रोटेसन बिग्रियो भने त सिलिन्डरको अभाव हुन्छ नि’, उनी भन्छन्, ‘त्यसरी कसैले पनि सिलिन्डर जाम नगराइदिए हामीले भर्न सक्छौं र अभाव पनि हुँदैन।’
नेपालका अक्सिजन प्लान्टहरूमा सिलिन्डर भने धेरैजसो चिनबाटै ल्याउने गरिन्छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय सिलिन्डरभन्दा चिनियाँ सिलिन्डर नै गुणस्तरीय मानिन्छ। भारतमा पनि धेरैजसो चिनियाँ सिलिन्डर नै प्रयोग हुन्छ।
नेपालगन्जमा भएको के हो?
खासमा सञ्चार माध्यममा ‘हेडलाइन’ बनिरहेको जस्तै नेपालगन्जको स्थिति भयावह त हो तर, अक्सिजनको त्यस्तो धेरै अभाव भने होइन। नेपालगन्जमा पनि अक्सिजनका प्लान्टहरू छन्।
त्यहाँको ठूलो भनिएको एउटा अक्सिजन प्लान्ट ‘एचओ’ अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरेकी नेपालगन्ज उपमहानगरकी उपमेयर उमा थापा भन्छिन्, ‘त्यो उद्योगले नेपालगन्जमात्रै होइन, पश्चिम नेपालकै माग पूरा गर्नसक्छ। तर, सिलिन्डरको अभाव छ। हामीले कसरी हुन्छ सिलिन्डरको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइरहेका छौं।’
उनका अनुसार छिमेकी जिल्लाहरूसँग समन्वय गरेर सिलिन्डर जुटाउने काम सुरु भइसकेको छ।
नेपालगन्जका कोरोना अस्पतालहरूमा अहिले लगभग बेडहरू भरिभराउ छन्। ३० जनाभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। जिल्लाको कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिले चिकित्सकहरूको टोली पठाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
‘नेपालगन्जको अवस्था हामीले नजिकैबाट हेरिरहेका छौं। त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका पनि छौं’, मन्त्रालयका सहप्रवक्त्ता डा. समिर अधिकारीले भने, ‘अक्सिजनको थप व्यवस्था गर्नका लागि त्यहाँको भेरी अस्पताललाई पैसा पठाइसकेका छौं र, छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि समन्वय गर्न भनेका छौं।’
उपमहानगरकी उपप्रमुख थापाका अनुसार खासगरी नेपालगन्जमा बेडहरूको व्यवस्था भइरहेको छ। तत्काल अस्पतालहरूमा बेड बढाउने योजना अघि बढिसकेको छ।
‘अक्सिजनको अभाव पनि त्यत्ति धेरै होइन। खास अभाव भनेको अहिले मेडिकल स्टाफहरूको हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि हामीले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं।’
oxygen in Nepal
अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट